Ede ịtụnanya n'oge 'ezi mmekọrịta ezinụlọ' yana obi ụtọ - Thrilltalk.com
Home/Kpamkpam/Ede nwere ihe ịtụnanya n’oge ezumike ezinụlọ ‘jiri obi ụtọ mee ya
0 37 Nkeji 1
Na nkwupụta nke ngosi ahụ, nke ga-alaghachi na Ede mgbe ọtụtụ afọ gachara, ekwuputara n'ụzọ doro anya na ọ bụ ihe ngosi na-atọ ụtọ naanị maka ezinụlọ. E nwere ebe nkiri dịka trampoline, maze iko na ọbọgwụ jide. Mana n'oge ewulite ya, obodo Gelderland yiri ka ọ ga-eju ya anya na ọtụtụ ọmarịcha ihe ntụrụndụ ndị ekwuputabeghị tupu oge eruo.
Sipkema na Eje na ProjektOne na-abịa
N'oge owuwu ahụ, Sipkema gosipụtara na ya na ya nọ KMG Afterburner. Lee ihe owuwu nke ihe ngosi:
Taa na echi ndị ndị ọrụ nwayoo na ebe nkiri ndị a niile ga-emeghe ka ọha na eze na Tuesday. Mgbe afọ 8 gasịrị, e nwere otu ihe ngosi ọzọ na Ede na nzukọ ga - edozi ihe ngosi ụmụaka nke corona. N'ụzọ dị mma, e kpebiri ịmalite ụfọdụ nnukwu azụmahịa.
Ihe omume bidoro: Tọzdee, Ọgọst 25, 2020
Ihe omume mechiri: Sọnde, Ọgọstụ 30, 2020
More ozi? Lelee kalịnda mara mma. Echefula soro anyị na Facebook.
Kpamkpam Ọrụ 1 Ogige Halllọ Nzukọ Obodo Sipkema